Dalkee u dhashay laacibka caanka noqday kaddib markii uu SOMALIA ka dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee caalami ah?!! (Hadal-hayn cusub) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dalkee u dhashay laacibka caanka noqday kaddib markii uu SOMALIA ka dhaliyey...
Dalkee u dhashay laacibka caanka noqday kaddib markii uu SOMALIA ka dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee caalami ah?!! (Hadal-hayn cusub)
(Hadalsame) 20 Nof 2021 – Laacibka caanka ah ee reer Ghana ee Asamoah Gyan ayaa noqday laacib caalami ah isagoo u saftay kooxo ka dhisan Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo horyaallo kale.
Yeelkeede, laacibkan caalamiga ah ayaa taariikh ku leh Somalia waayo wuxuu maanta oo kale 18 sanadood kahor 2003-dii ka dhaliyey goolkiisii 1-aad ee caalami ah.
Gyan oo u saftay Udinese, Rennes, Sunderland iyo kooxo kale ayaa dalkiisa Ghana ka caawiyey inay usoo baxaan koobkoodii adduun ee abid ugu horreeyey 2006-dii, iyagoo deeto si xiriir ah ugu soo baxay KA ee 2010 iyo 2014, kuna sigtay inay noqdaan dalkii ugu horreeyey ee Afrikaan ah ee nus-dhamaadka gaara 2010-kii.
Dalka Ghana ayaa maanta arrintaa laga hadal hayaa maadaama ay tahay sanad-guuro u muhim ah dalkaasi, waxaana dadka xusay ka mid ah Yaw Ampofo Jr oo ah weriye ciyaareed oo caan ka ah dalkaasi.
Previous articleTOOS u daawo: Leicester City vs Chelsea – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article”Waa sawir muujinaya nacasnimada madaxda Somalia!” – Sawir laga qaaday ”xadka” Somalia-Kenya oo mudan in aad looga fikiro